Naing BSell | Item - ပါးသိုင်းမွှေး/မျက်ခုံးမွှေးပေါက်ဆေး )လေးရောက်ပါပြီရှင့် 😍😘 စျေးနှုန်း... 13000 ks (60ml)မှာယူလိုပါက. 09 693544023 099 755 68804 ph/ vibeဆေးဝါးအတုအပသတိပြုပါ Beard Oil(60ml ) ပစည်အစစ်ဖြစ်ကြောင့် (100)% အာမာခံပါသည် မျက်ခုံးမွှေး နှုတ်ခမ်းမွ
ပါးသိုင်းမွှေး/မျက်ခုံးမွှေးပေါက်ဆေး )လေးရောက်ပါပြီရှင့် 😍😘 စျေးနှုန်း... 13000 ks (60ml)မှာယူလိုပါက. 09 693544023 099 755 68804 ph/ vibeဆေးဝါးအတုအပသတိပြုပါ Beard Oil(60ml ) ပစည်အစစ်ဖြစ်ကြောင့် (100)% အာမာခံပါသည် မျက်ခုံးမွှေး နှုတ်ခမ်းမွ
မုတ္ဆိတ္ပါးသိုင္း မ်ကိခံုး ေမႊးေပါက္ေဆး
အရပ်ရှည်ဆေး😍Height Up CalciumUSA Made အလုံး 30 ပါ 1ဘူး - 10000 ကျပ်အရပ်ရှည်ဆေး ၂ဘူးဝယ် - ၁ဘူးလက်ဆောင်ပါ 🎁09958310274 09693544023 ph/viberဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်လက်ရှိအရပ်ထက် ထပ်ရှည်လိုပါသလားဘယ်ဆေးမှမတိုးလို့ ထပ်မရှည်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်နေပါသလားအရပ်ရှည်ဆေ
ပါးသိုင်းမွှေး/မျက်ခုံးမွှေးပေါက်ဆေး )လေးရောက်ပါပြီရှင့် 😍😘
စျေးနှုန်း... 13000 ks (60ml)
မှာယူလိုပါက. 09 693544023
099 755 68804 ph/ vibe
Beard Oil(60ml )
ပစည်အစစ်ဖြစ်ကြောင့် (100)% အာမာခံပါသည်
ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် မျက်ခုံးမွှေး ပါးသိုင်းမွှေးများ လျှင်မြန်စွာ ပေါက်လာသောကြောင့် Customer များ၏ ယုံကြည်စွာ တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ Beard Oil က တကယ့်ပစ္စည်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ
မျက်နှာသန့်စင်ပြီးမေးရိုးတလျှောက် အကြောလေးတွေ လျော့သွားအောင်နှိပ်နယ်ပေးပြီး တနေ့နှစ်ကြိမ် အသားထဲစိမ့်၀င်အောင်လိမ်းပေးရမှာပါ
မွှေးညှင်းရဲ့အမြစ်အချေ ခိုင်ချိန်ကြမှ ရိတ်ပေးပါ
(ပြန်မထွက်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး အခြေခိုင်သွားပြီဆို တစ်သက်လုံးအတွက်ပါ)
ကျန်တဲ့အချိန်လိမ်းတာထက် ရေချိုး (or)မျက်နှာသစ်ပြီးချိန်များမှာ လိမ်းတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်😉
မင်္ဂလာပါ ရှင့် 🙏🙏🙏
ယူလိုပါက. 09 693544023
099 755 68804 ph/ viber
💌 ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက💌
📝ပေးပိုရမည်နေရာ လေး ပေးပိုပေးရပါမည်
နယ်မိတ်ဆွေကတော wave money & tue money &kbz pay & KBZ BANK ကနေ ငွေသားဝင်မှာသာလျင် ကားဂိတ်ကနေ ပိုဆောင်ပေးပါတယ် ပစည်းရောက်သည်အထိတာဝန်ယူပိုဆောင်ပေးပါတယ်
© 2022 - Naing BSell. All rights reserved